काठमाडौं, २६ कात्तिक – हवाइजहाजमा यात्रा गर्दै गर्दा गम्भीर हृदयघातको समस्यामा परेका एक विदेशी नागरीकलाई नेपाली डाक्टर रविन्द्र बास्कोटाले बचाएका छन् ।
दुई साता अघि एक साताको इजिप्ट भ्रमण गरेर नेपाल फर्कने क्रममा इजिप्टको अलेकजेन्ड्रिया इन्टरनेशनल एयरपोर्टबाट युएईको सारजाहका लागि उडेका नेपाली डाक्टर बास्कोटाले सोहि जहाजमा यात्रा गरेका करीब ६० बर्षको इजिष्ट अरेवियन नागरिकको ज्यान बचाएका हुन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको कुष्ठरोग नियन्त्रण केन्द्रमा कार्यरत डा. बास्कोटा डर्माटोलोजिमा बीर अस्पतालबाट एमडी गरेका छन् । पढाइको सिलसिलामा बीर अस्पतालबाट एडभान्स कार्डियाक लाइफ सपोर्टको तालिम लिएका डा बास्कोटाले आफुले लिएको तालिमको सदुपयोग गरे ।
तालिममा हर्ट एट्याक भएका बेला तत्काल कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भनेर सिकेका उनले समयमै अरवियन नागरीको समस्याको केश पत्ता लगाएर उपचार गरे ।
अरेवियाका पाइलटले जहाजमा चढेको ४५ मिनेट पछि नै विमानभित्र ‘यात्रामा रहनुभएका मध्ये कोही डाक्टर नर्स वा प्यारामेडिक्स हुनुहुन्छ ? भनेर ‘एनाउन्स’ गरेपछि नेपाल फर्कदै गरेका डा. बास्कोटाले क्रियू मेम्बरसंग आफू चिकित्सक भएको जानकारी गराए ।
‘मैले आफु चिकित्सक भएको कुरा जनाकारी गराएपछि उनीहरुले एक बृद्ध यात्रुको स्वास्थ्य अवस्था विग्रिएको भन्दै हेरिदिन आग्रह गरे ।’ उनले भने, ‘म विरामी नजिकै गएर हेरे विरामीको अवस्था कमजोर थियो । विरामीले एकदमै स्वास फेर्न गाह्रो भएको बताए । हातखुट्टा र शरीर निलो हुँदै गएको थियो । बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।’
विरामीको अवस्था हेरेर डा. बास्कोटाले उनलाई हृदयघात भएको थाहा पाए । अरबी भाषा मात्रै बोल्ने बिरामीको संवादलाई क्रु मेम्बरले अंग्रैजीमा परिवर्तन गरेर उनको उपचार गरेको बास्कोटाको भनाइ छ ।
‘विरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता थियो मैले क्रु मेम्बरलाई भनेर अस्किजन लगाइदिएँ । जहाजको इमरजेन्सी बक्समा औषधीहरु रहेछ । त्यसमा हेरे हृदयघातका बेला आवश्यक पर्ने एस्पीरिन नमक औषधी पनि रैछ । उनलाई त्यो पनि खान दिए ।’ बास्कोताले विस्तारमा सुनाए, ‘करीब ४ घण्टाको सो फ्लाइटमा सबा तीन घण्टा विरामीसंगै रहें । औषधी र अस्किजन दिएको एक घण्टामा विरामीको अवस्थामा क्रमिक रुपमा सुधार आयो । छाती दुखाई कम भयो भने, विरामीको निलो भइसकेको शरीरले नर्मल अवस्थाको रुपम लियो ।’
यात्रामा रहेको ४ घण्टा पछि सारजाह एयरपोर्टमा पुगेपछि विमानस्थल भित्रै एमबुलेन्स र डाक्टरको टोली आएर विरामीको उद्धार गरेपछि डा. बास्कोटा विरामीसंग छुटिए ।
बास्कोटाले त्यो समयको स्मरण गर्दै भने, ‘हृदयघातको समस्यामा परेका विरामीलाई मैले प्रथमिक उपचार मात्रै गरेको थिए । त्यतिवेला प्राथमिक उपचार नपाएको भए उनको मृत्यु पनि हुन सक्थ्यो । छुटिने बेलामा विरामीले म तिर हेर्दै कृतज्ञता प्रकट गरे । मलाई पनि खुसी लाग्यो ।’
तालिम लिएर सो रोगको लक्षणसम्बन्धी ज्ञान भएकाले नआत्किकन उपचार गर्न सफल भएकोमा खुसी लागेको उनने बताए ।
बास्कोटाले भने, ‘अस्पतालहरुमा त अन्य चिकित्सकहरु पनि हुन्छन् तर त्यहा म एक्लै थिए । भाषा बुझिँदैन थियो तर पनि आफुले जाने अनुसार प्रयास गर्दा एक अन्जान विरामीको ज्यान जोगाउन सकें । सबैले राम्रो काम भनेर प्रोत्साहन गरे खुसी लाग्यो ।’
बाँके निकुञ्जमा बाघको संख्या ह्वात्तै बढ्यो, संरक्षणमा चुनौती बाँके – बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो । बाघ संरक्षणकै लागि स्थापना गरिएको निकुञ्जमा बाघ गणनाको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार २१ बाघ पुगेका छन् । बाघको सङ्ख्या बढेसँगै बाघ...
दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मन सैनिकसँग सम्बन्ध राख्ने महिलामाथि भएको दुर्व्यवहारमा नर्वेले माग्यो माफी